MPANJAKA MITADY FIHAVANANA. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 décembre 4, 2015 Laisser un commentaire sur MPANJAKA MITADY FIHAVANANA.
« Lazao amin’ny Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Matio 21:5
Ny fiavian’i Jesosy eto amin’izao tontolo izao ity dia Roa:
– Ilay Jesosy Zanak’Andriamanitra velona, Ilay Teny tonga nofo, naterak’i Maria tao an-tranonomby, Ilay Andriamanitra amintsika, niara-nonina tamin’ny olombelona, Mpanjakan’ny mpanjaka, Andriamanitra mahagaga. Ary dia io Jesosy zaza io, efa lehibe no ambara eto amin’ity Matio 21:5 eto ity. Io Jesosy io no Mpanjaka mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ny ambaran’ny hoe mpanjaka mitaingina boriky dia mpanjaka mitady fihavanana. Azon’ny mpanjaka atao tokoa ny mitaingina soavaly fa tsy boriky tahaka ny eto, satria ny soavaly dia kinga tokoa fa tsy mitaraiky tahaka ny boriky. Ka rehefa hiady ny mpanjaka dia soavaly no entiny. Ny ambaran’izao dia mpanjaka mitady fihavanana Jesosy eto amin’ity
fiaviany voalohany ity!
– Ilay Jesosy tonga fanindroany dia tsy Jesosy mitady fihavanana intsony fa Jesosy mitondra ny fitsarana izao tontolo izao: ho avy hitsara, ka hanavaka ny olony sy ny tsy olony! Vita teo ny fitadiavana fihavanana! Fitsarana no sisa!
Izao anio izao ary dia mbola Ilay Jesosy mitaingina zana-boriky no tonga eto amin’izao teny izao! Mbola mitady fihavanana Izy. Raiso izany tanana mitsotra izany dia tsy hanan-tahotra hianao amin’ny andro fitsarana ho avy!
Publié parfilazantsaramada décembre 4, 2015 Publié dansUncategorized